. कोरोना भ्याक्सिन सर्बसाधारणमा लगाउन डब्लुएचओको अनुमति::Online News
भर्खरै : कोरोना भ्याक्सिन सर्बसाधारणमा लगाउन डब्लुएचओको अनुमति
एजेन्सी । बिश्व स्वास्थ संघसंगठन ( डब्लुएचओ) ले चिनमा तेस्रो चरणको परिक्षण गरिरहेको कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनलाइ आम मानिसमा लागाउन अनुमती प्रदान गरेको छ । रोयरर्सका अनुसार चिनियाँ स्वास्थ अधिकारिले डब्लुएचओ आम मानिसमा कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन अनुमती दिइएको जानकारी दिइएको छ ।
डब्लुएचओ ले अहिले सम्म आपतकालीनका लागि कुनै पनि देशलाइ अनुमती दिइएको छैन। चिनले डब्लुएचओ आपतकालीन रुपमा सर्बसाधारणमा अब भ्याक्सिन दिनको लागि अनुमती प्राप्त गर्ने देशको सुचिमा सबै भन्दा आफू अगाडि रहेको साबित गरेको छ ।
चिनले तेस्रो चरणमा ५ ओटा भ्याक्सिन परिक्षण गरिरहेको छ । त्यस मध्य सबै भन्दा राम्रो मानिएको भ्याक्सिन आम नागरिकमा प्रयोग गर्नकालागी डब्लुएचओले कोरोना भ्याक्सिनको बारेमा हालै जानकारी दिएको बताएका छन । चिनले तेस्रो चरणको भ्याक्सिनको लागि आम मनिसलाइ लगाउदा पश्चिमा देशहरुले आलोचना गरेका थिए । चिनले आपतकालीन रुपमा जुलाइमा भ्याक्सिन प्रयोग गर्न अनुमती दिइएको थियो । चिनिया नेशनल हेल्थ कमिसनका अधिकारी झेङ्ग झोङ्गवेइले डब्लुएचओ कोरोना भ्याक्सिनको बारेना हालै जानकारी गराएको बताएका छ्न । चिनले यश अघिनै आपतकालीन रुपमा लाखौं मानिसलाइ कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन दिन सुरु गरिसकेको छ । डब्लुएचओका डायरेक्टर जनरल डा. मरिअनजेला सिमाओले आपतकालीन प्रयोगकालागी अनुमती दिइएको जानकारी दिइएका अन्तरास्ट्रिय सञ्चार माध्यमले खबर छापेका छन । डब्लुएचओका प्रमुख बैज्ञानिक सौम्या स्वामिनाथले आपतकालीन प्रयोग अस्थायी समाधान भन्दै तेस्रो चरणको परिक्षणको नजिताले विशेष महत्त्व राख्ने बताएका छन ।
सिएन्जिबी र सिनोभ्याक भ्याक्सिन चिनमा आपतकालीन रुपमा दिइन थालिएको छ । क्यान्सिनो भ्याक्सिन भने मिलिट्रीको लागि प्रयोग गरिएको छ । चिनियाँ अधिकारिले सन २०२० को अन्तिम सम्म चिनले भ्याक्सिन बजारमा ल्याउने बताएका छ्न । एक बर्ष भित्र ६१ करोड भ्याक्सिन उत्पादनको क्षमता आफ्नो देश संग भएको चिनले जनाएको छ ।
लुसाका । दक्षिण अफ्रिकी मुलुक जाम्बियाको साउथ लुआनग्वा राष्ट्रिय निकुञ्जमा देखिएको एउटा दृश्य यतिबेला सामाजिक सञ्जालभर भाइरल बनेको छ ।.Reading
१ कात्तिक, काठमाडौं । भारतको केन्द्र शासित प्रदेश जम्मु–कश्मीरमा गत सोमबारदेखि जारी सेना र आतंकवादी समूहबीचको मुठभेडमा २२ जनाको मृत्यु.Reading
भोजपुरमा आज थप ५ जनामा कोरोना पुष्टि ,कुन पालिकामा कती संक्रमित
कक्षा १२ को परिक्षा मंसिरको दोश्रो सातामा हुन सक्ने मन्त्रीपरिषद् को सहमति